Qarax Laptop loo Adeegsaday oo Afar Qof ku Dhaawacay Garoonka Diyaaradaha ee Baladweyne – Radio Daljir
Qarax Laptop loo Adeegsaday oo Afar Qof ku Dhaawacay Garoonka Diyaaradaha ee Baladweyne
Maarso 7, 2016 10:08 b 0
Bacaadweyn, Maarso 07, 2016 (Daljir) —Afar ruux oo mid ka mid ah uu ahaa Askari Ciidamada Jabuuti ee Qaybta ka ah Hawl-galka Midowga Afrika ee Somalia ee AMISOM ka mid ah; ayaa ku dhaawacmay Qarax barqanimadii maanta ka dhacay Bar-koontarool oo ku Taalla Afaafka hore ee Garoonka Diyaaradaha Beledweyne ee Ugaas Khaliif.
Col. Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle oo ah taliyaha qeybta booliiska magaalada Beledweyne oo faah faahin ka bixiyay qaraxa, ayaa sheegay in loo adeegsaday Computer nooca Laptop -ka ah oo lagu soo dhax qarxiyay alaabta kala gadisan oo ay wateen dad doonayay in ay ka dhoofaan garoonka.
“Labo Qarax ayay ahaayeen, mid ka mid ah waxaa lagu soo Qariyay Kambiyuutarrada lagu qaato gacanta ee Laptop-ka, halka kan kalena uu ku xirnaa Printer -ka Kambiyuutarada loo adeegsado, Waxaana Qarxay kii ku Xirnaa Laptop-ka, kan kale isagoon qarxin ayaa la kala furfuray,” ayuu G/dhexe Cali Dhuux yiri.
Waxaa uu intaa ku darray in qorshuhu ahaa marka hore in gudaha garoonka loo sii gudbiyo qaraxyadan ama lala sii raaco oo lagu qarxiyo diyaarada, laakiin lagu ogaaday Baaritaanka lagu sameeyo alaabaha kala gadisan oo ay sitaan dadka dhoofaya.
“Qaraxyadan waxaa la doonayay in loo sii gudbiyo gudaha garoonka ama haddii ay Suuro-gal tahay lala sii raaco diyaarada si loogu qarxiyo, Waayo haddii uu ahaa Qarax loogu talo-galay in koontaroolka lagu wax yeeleeyo laguma soo dhax qariyeen alaabta ay siteen dadka rakaabka ah, taas ayaana kuu caddeyneysa in Qaraxan la isku dayay in loo gudbiyo Gudaha Garoonka,” ayuu yiri G/dhexe Cali Dhuux.
Wiil Somali Ah oo Lagu Dilay Swedan